Feon-kira miaraka amin'i Sara Glaser, CAS | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Fehezina miaraka amin'i Sara Glaser, CAS
Fehezina miaraka amin'i Sara Glaser, CAS
Na dia azo antoka aza fa miakatra amin'ny fironana ambony ireo isa, dia mbola tsy fahita firy raha mahita "vehivavy am-peo," indrindra fa ny iray malaza toa an'i Sara Glaser, CAS. Rehefa avy natomboka tamin'ny indostrian'ny oniversite izy tamin'ny maha-injeniera firaketana efa ho 20 taona lasa izay, ny fahombiazana lehibe nataon'i Glaser dia hita ao amin'ny asany ho toy ny mpamorona feo mpamokatra ho an'ny sarimihetsika sy fahitalavitra episodika. Anisan'ny fahazoan-dàlana farany indrindra amin'izy ireo Westworld, Gray's Anatomy, Feud: Bette sy Joan ary ny sarimihetsika Netflix mampiavaka, Rimin'izao tontolo izao.
Mizara bebe kokoa momba ny asany audio izy, ary manao ahoana ny maha vehivavy azy amin'ny indostria, amin'ny DPA farany "Sound Insight" Q&A, eto ambany.
F: Ahoana no nidiranao tamin'ny sehatry ny fifangaroan'ny feo?
A: Na dia nihalehibe aza aho Los Angeles, Tsy notezaina tamin'ny fialamboly toy ny ankamaroan'ny mpiara-miasa amiko. Nahita firaketana mozika aho rehefa nandeha nianatra tany amin'ny oniversite. Andro voalohan'ny Internet io, ary nametaka teo amin'ny tabilao hafatra ho an'ny studio aho ary tamin'ny toe-javatra fandraisam-peo mivantana, ary nofatorana avy hatrany aho. Mipetraka eo aho mandritra ny ora maro, mamerina ny tantara momba an'ireo bandy izay namboarina tao amin'ireto studio noraketana taona ireto tamin'ny taona 70, ary tsaroako fotsiny ny nieritreritra fa tena nahafinaritra izany.
Farany, nisy namako iray nanome ahy katalana ho an'ny UCLA, izay nandehanako nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny Recording Engineering, Songwriting ary Music Business. Nanatrika ny fahazarana fanazaran-tena voalohany tao amin'ny Oceanway Studios aho ary raha vao nikasika mpamadika dia nianjera avy hatrany aho. Volana voalohany taty aoriana dia nahazo ny asako voalohany tao amin'ny studio iray fandraisam-peo aho - ary tsy mora toa izany satria toa, tamin'ny 1998, ny vehivavy dia tsy nokaramaina ho injeniera.
Nandritra ny fitadiavako asa, nisy mpiara-miasa iray nilaza tamiko handefa ny diako tany amin'i Bill Dooley — nantsoina hanao dinidinika aho ary nanomboka ny diako tamin'ny tontolon'ny firaketana. Tamin'ny andro voalohany, dia nitaiza ahy ho injeniera izy - nampiofana ahy izy ary nampianatra ahy ny fomba hisafoana. Mbola mampiasa ireo teknika nampianarin'i Bill ahy aho isan'andro.
Taorian'izay dia nivezivezy tamina studio iray hafa aho. Avy eo, nivoaka ny Pro Tools ary nanova tanteraka ny indostria. Nisy studio maro nikatona, ary vitsy ny asa azo. Noho izany, tamin'io fotoana io dia nanapa-kevitra ny hamandoana ny tongotro tamin'ny tontolon'ny famokarana. Nanomboka toy ny tonian-dahatsoratra fanarenana aho taloha alohan'ny nitodihako tamin'ny famokarana feo tamin'ny faran'ny 2003; ary izaho hatrizay hatrizay. Lalana adala izany, saingy nahafinaritra ary nisy olona be dia be niara-niasa tao anatin'izay taona maro lasa aho. Tsy fantatro izay hataoko - ho ahy, tsy misy zavatra mahaliana sy mampientanentana toy ny miasa amin'ny audio.
F: Inona avy ireo zava-tsarotra atrehina amin'ny maha vehivavy vehivavy amin'ny feo?
A: Amin'ny maha-vehivavy ao amin'ny indostrian'ny lehilahy iray efa lehibe, tsy maintsy mandresy ny sakana izay tsy azon'ny ankamaroan'ny mpiara-miasa amiko aho. Rehefa niverina tany amin'ny UCLA aho ary nanao fangatahana an-tsoratra ny asan'ny studio tany LA, dia nilaza tamiko ny namako fa tsy hanelingelina amin'ny studio sasany satria izy ireo ihany no nanakarama vehivavy ho fandraisana. Nandritra ny taona maro izay dia nianatra namolavola hoditra matevina aho, ary koa mitazona ny saina misokatra. Nilaza izany, mahafinaritra ny mahita ireo vondrona mihetsika ao anaty orinasa izay mampiroborobo ny fahasamihafana eo amin'ireo namanay.
F: Inona no torohevitra homenao ho an'ny vehivavy hafa izay liana amin'ny asa amin'ny resaka audio?
A: Betsaka ireo olona manokana ato amin'ity orinasa ity ary tsy afaka mandray na inona na inona manokana ianao. Mirary soa amin'ny olona satria izay no handrenesan'izy ireo fa tadidio foana fa mikasika ilay asa aloha. Ny olona miorina ao amin'ny PA napetraka androany dia ao amin'ny biraon'ny famokarana manakarama anao rahampitso, noho izany dia irinao ho fantatr'izy ireo fa miasa mafy ianao ary mpilalao ekipa. Ataovy hatrany izay tsara indrindra, dia ho tadidin'ny olona rehefa ametrahanao ny ezaka.
Ny indostrian'ny fanamafisam-peo dia vondrom-piarahamonina somary raikitra; tiantsika ny mifaninana. Manana namana manerana an'i LA aho ary mifampitady hatrany isika, na hanipy hevitra na hizara teknika vaovao. Ka aza matahotra ny hanantona sy mametraka fanontaniana. Ary koa, indrindra ho an'ny vehivavy, manaja ireo tonga teo alohanao ary efa niady ny ady mba ho eto ianao.
Farany, tadidio fa mpianatra maharitra mandritra ny orinasam-peo ianao. Amin'ny fotoana anananao ny fiheveranao fa tsy ao an-tsekoly ianao dia nitombo tamin'ny maha-matihanina anao. Satria mitombo ny fifangaroan'ny feo, indrindra fa raha mbola mandroso ny teknolojia, dia mivoatra hatrany isika ary manatanteraka fomba vaovao mikasika ny fomba hanaovana zavatra. Eo indrindra no hanokafan'ny saina malalaka.
Q: Azonao atao ve ny milaza ny momba ny zavatra niainanao voalohany tamin'ny DPA Microphones?
A: Vao tamin'ny voalohany aho dia nametaka ny tanako tamin'ny microfone DPA tamin'ny taona 2013. Tsaroako fa tonga teo amin'ny toerana iray izay handehanana aho. Tsy nandinika akaiky ny mics aho, dia nanomboka ny fanamarinana ny feoko ary nahatsikaritra avy hatrany ny fahasamihafana. Tsy afaka nino aho fa mazava sy voajanahary ny hatsaran'ny feo — feno sy tsara tarehy tokoa. Raha ny fandehany dia nampiasa ny 4017 Shotgun Mic aho DPA. Hatramin'ny fotoana izay dia fantatro fa ny vahaolana ho an'ny boom-bidy no ho safidiko: tsy ho voadaroka ny kalitao tsara. Teo am-piasana tamin'ity seho ity dia nanana fotoana ihany koa aho naka ny tanako tamin'ny sary 4061/71 Miniature Omnidirectional mics. Izy ireo dia feo feno ary tena voajanahary. Tena tsara tarehy izany - ary rehefa nifankatia tamin'ny DPA Microphones aho. Avy tany aho dia nanomboka nizara ny fitiavako ny marika tamin'ny mpangaro hafa feo, ary andiana mpiara-miasa dia nitsambikina tao amin'ny tarika DPA. Mandeha eny amin'ny DPA foana aho.
F: Inona ny mika DPA izay ampiasainao, ary inona avy ireo endri-javatra sy fampitaovana fahalalàna izay nanampy anao?
A: Nandritra ny fito taona lasa, nahazo arsenalan'ny vahaolana DPA aho. Anisan'izany ny 4017 Shotgun, 4061/71 Miniature Omnidirectional ary 4098 Supercardioid Microphones. Mitodika amin'ireto aho ho an'ireo rehetra ilaina amin'ny fandraisam-peo ataoko amin'ny fampiharana amin'ny fahitalavitra sy amin'ny sary mihetsika. Rehefa mampiasa mika zavamaniry DPA aho dia fantatro fa afaka miditra fotsiny izy ireo ary manafina azy ireo ary alaina foana ny feo kristaly ary tsy hita amin'ny fakantsary. Indraindray, tsy mikorontana tena malefaka ny mikrôzika kely satria mihena ny haben'ny diaphragm, saingy toa nahalala ny fomba hanaovana an'io asa io ny genius ao amin'ny DPA. Mahagaga ihany koa ireo mpanamory mini 4061 sy 4071 - manamboatra paosy be ireo mics kely ireo!
Ny DPA Microphones 'manorina kalitao, miaraka amin'ny paleta sonic, dia manome ahy vahaolana feno mikrofon-tsofina ho an'ny zavatra rehetra ilaiko. Tahaka ny loko amin'ny mpanakanto iray, ny mics dia zava-drehetra amin'ny fifangaroan'ny feo, ary mila vahaolana azoko ianteherana. Matetika aho dia miasa amin'ny toe-piainana henjana, izay tsy tianao ny hampahafantatra ireo mikrô. Miaraka amin'ny DPA, fantatro fa ho velona ny mics na inona na inona tontolo iainako; ary hitsoka tsara izy ireo mandritra ny fotoana rehetra.
Ankoatr'izay, ny sarimihetsika dia voatifitra amina zato isan-karazany — tifitra, toerana, toerana ary avy eo ireo feo rehetra ireo dia alefa amin'ny famokarana aorina mba hifangaro miaraka. Miaraka amin'ny DPA, afaka manao ny moramora ny asan'ny ekipan'ny ekipa aho satria mifanandrify am-panandramana ny ataoko. Amin'izany fomba izany, rehefa mitsambikina eo anelanelan'ny làlambe sy ny dian-tsoavaly izy dia tsy mibolisatra aminao; toa mandeha tsy misy tomika. Ny tsy fitovian'ny sonic eo amin'ny mikrofon'ireo DPA dia tena mahavariana — tsy afaka mandre fahasamihafana iray ianao amin'ny manaraka. Tena sarobidy amiko izany satria matetika dia miara-miasa amin'ny mics marobe aho indraindray. Raha izaho manokana aloha, hitako matetika ny DPA dia fifaliana mifangaro. Ny miasa miaraka amin'ny marika dia mametraka tsiky foana amin'ny tavako.
F: Amin'ny maha mpankafy ny DPA Microphones anao, ahoana ny fanatsaran'ny vahaolana marika hanatsarana ny fivezivezena any amin'ny toerana misy anao?
A: Ny tompon'andraikitra dia ho avy hanantona ny fomba tian'izy ireo hanao zavatra - amin'ny maha-mpangaro mixer, dia mila manao azy io ianao. Mba hahatratrarana an'izany dia mila mikrofonona be feo aho, aza sakanana ilay sarimihetsika ary tsy hita anaty fakantsary. Hitako avokoa izany rehetra izany miaraka amin'ny DPA Microphones. Izaho irery no nanana traikefa nahafinaritra tamin'ilay marika, ary isaky ny DPA mic izay nahavita nitazona ny tanako, dia mandondona azy ireo fotsiny izy ireo isaky ny misy ny zaridaina. Tsy nisy nanakaiky ny DPA teto amin'izao tontolo izao. Azoko mahazo izay rehetra ilaiko aho fa mahazo valiny feno valiny miaraka amin'ny feo voajanahary indrindra. Manantena fatratra ny hanohizako hatrany ny vahaolana amin'ny DPA amin'ny tetikasa ho avy.
Fehezina miaraka amin'i Sara Glaser, CAS - Jolay 29, 2020
Vokatra ny teknolojia Studio amin'ny alàlan'ny Markertek sy TecNec - Jolay 29, 2020
Miara-miasa miaraka amin'i BR Remote ny Marshall Electronics mba hamoronana CV-PT-HEAD Micro Pan / Tilt Mount Head ho an'ny fantsom-pahitalavitra Miniature. - Jolay 27, 2020
DPA mikrô Lavaliers Sara Glaser 2020-07-29
Previous: Vokatra ny teknolojia Studio amin'ny alàlan'ny Markertek sy TecNec
Next: Broadcast Pix dia manambara ny famatsiam-bola 0% amin'ny Rafitra StreamingPix